किन लिनु पर्यो नेपाली सेनाले इजरायली सेनाबाट तालिम ? « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
किन लिनु पर्यो नेपाली सेनाले इजरायली सेनाबाट तालिम ?
प्रकाशित मिति : २०७६, १४ मंसिर शनिबार ०९:३२
नेपालको सेना शान्ति मिसनका लागि सबैभन्दा अब्बल भएको कथा सुनिन्छ तर यही अब्बल सेनाले भए नभएका देशहरुसँग तालिम लिईरहेको देखिन्छ । अमेरिका, इजरायल, बेलायत, ईण्डिया, चीन सबैसँग तालिम लिनु पर्ने सेना के कुरामा अब्बल हो ? देशको भूमि विदेशी आक्रमणबाट रोइरहेको छ, सेना कसका लागि कर्तव्यनिष्ठ हो ?
हुँदाहुँदा यहाँको सेनाले इजरायलबाट तालिम लिन थालेको छ । इजरायल अमेरिकाको षड्यन्त्रकारी मोर्चा हो । अमेरिका पाकिस्तानसँग सिधै देखिन नचाहेर काश्मीर घटना घटाउन इजरायललाई प्रयोग गरेको छ । अमेरिकाले नेपालमा मुजाहिद्दिनहरुको आक्रमणको खतराको हौवा चलाएर इजरायललाई सकृय बनाएको यथार्थता बुझ्न कुनै कठिनाई छैन ।
मुस्लीम जेहादीका बहानामा विश्वमा सबैभन्दा सकृय देश इजरायल हो । नेपालमा इजरायलले अमेरिकाले परिकल्पना गरेका मुजाहिद्दिनहरुका बहानामा हिंसा गराउने सम्भावना छ। नेपाली सेनामा इजरायलको प्रवेशको घटना अमेरिकाको ’ईण्डो(प्यासिफिक रणनीति’ अन्तर्गत् शक्ति केन्द्रिकरणको योजनाको एउटा हिस्सा हो भन्ने तथ्यलाई नभुलौं ।